अवसरको खोजी कि देश छाड्ने व्यग्रता ? नेपालमा अफ्रिकन फुटबलर - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
अवसरको खोजी कि देश छाड्ने व्यग्रता ? नेपालमा अफ्रिकन फुटबलर
सोमवार, साउन २१, २०७५ (August 6, 2018, 12:11 pm) मा प्रकाशित
सोमवार, साउन २१, २०७५, ।
काठमाडौं । भिक्टर एमोबी आफ्ना २० साथीहरुसहित नाइजेरियाबाट फुटबल खेल्न पाइन्छ कि भनेर नेपाल आइपुगे । उनलाई भनिएको थियो, नेपालमा फुटबल निकै राम्रो छ ।